Iindaba - Olunye uhlobo lokucoca utshani lusebenzisa awazi
Enye into yokucheba ingca ayisebenzisi ongaziyo
Siyazi ukuba zininzi iimilo iincakuba zokucoca ingca, ke kuya kusiba nzima kakhulu kuthi ukuba sikhethe. Ukukhetha njani iincakuba zokucoca ingca? Ungayilungisa njani i-blade ye-mower? Kwaye ungayisebenzisa njani kwaye uyigcine i-blower mower blade? Lo mhleli ulandelayo uza kwazisa wena.
Ungayitshintsha njani i-blade yomatshini wokucheba ingca?
Xa uhlengahlengisa blade iqhosha lemenyu yokucheba ingca, kufuneka uqinise isikrufu, uyijike ngo-1 / 4-3 / 4 ujike, ujije kwi-nut, usebenzise i-washer, ukuba iwasha inokuhamba ngokuguquguqukayo, qinisa i-nut kwaye ujonge iphedi kwakhona ukuba ingaba incakuba iyakwazi ukuhamba , ukuba iscrew siqinile, ikhaba alinakuhamba. Emva kokuba yonke into ifakiwe, vavanya idrayivu, iblade ibaleka umzuzu omnye, chukumisa isikrufu ngesandla sakho, kuyatshisa okanye kushushu kakhulu, ibrashi yokusika ibrashi ibonisa ukuba iscrew siqinile, nceda uhlengahlengise kwakhona.
Yenza umsebenzi olungileyo kulondolozo lwamacandelo okucheba ingca
Oomatshini bemveli bokuhlakula iigadi abasakwazi ukuziqhelanisa nefomu esele ikhona yokutyala igadi yeziqhamo, kunye ne-cutter brush entsha blade umsiki webrashi iyakwazi ukuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zomsebenzi wokulusa ukhula wangoku. Ukusetyenziswa kwabasiki bebrashi kwimisebenzi yokhula kungaphucula ukusebenza ngokukuko. Amacangci okusika ibrashi anokugcinwa emhlabeni ukuthintela ukhukuliseko lomhlaba, ukuhombisa imeko-bume, ukugcina amanzi kunye nokuxela ukufuma, kunye nokwandisa izinto eziphilayo zomhlaba.
Indlela yokusebenzisa i-brush cutter blades ngokukhuselekileyo
A. Sebenzisa ipetroli efanelekileyo kunye ne-oyile ye-injini, kwaye uqinisekise umlinganiso wokuxubana webrashi yokusika ibrashi (25: 1 okanye 50: 1).
Rhoqo (iiyure ezingama-25) jonga endaweni yento yokucoca umoya kunye ne-plug plug.
C. Emva kokusebenza ngetanki leoyile, kuya kufuneka uphumle imizuzu eli-10, kwaye ucoce igasket evulekileyo yomatshini emva komsebenzi ngamnye ukuqinisekisa ukusasazeka kobushushu.
D. Xa ugcina, kufuneka ucoce umzimba, uyeke ipetroli exubeneyo, ibrashi yokusika ibrashi iyitshise ipetroli kwi-vaporizer, susa iplagi, yongeza i-1-2ml yeoyile kwisilinda, tsala i-starter 2-3 amaxesha, Faka iplagi yintlantsi.
Ubude betsheki yenylon yesinqe sebrashi kufuneka ilawulwe (= 15cm). Xa usebenzisa i-blade ye-blade cutter blade, ibhalansi yomtya kufuneka iqinisekiswe, kwaye ikhaba elinentshukumo alifanele lisetyenziswe.
(1) Intambo-yengca yethenda ekulula ukuyisika.
(2) Isikwere blade-ikakhulu ubunzima obunzima kunye nobunzima njengengcongolo.
(3) iRhombus blade-yemidiliya, amahlahla amancinci, kunye nolukhuni.
Ufakelo lwentambo yokucheba ingca
Ukuqhaqha intloko yokucheba, emva koko uthathe umxholo ojikelezayo ngaphakathi kwaye ujije intambo yokucheba. Ubude bentambo yokucheba akufuneki bude kakhulu, i-10-15cm ifanelekile, akukho lula ukubetha, akukho lula ukuyilawula, kwaye kulula ukuyaphula. Xa ufaka, bopha iqhina kwi-shaft okanye kwintloko yokucheba, kwaye ukhuphe intambo kwicala elahlukileyo, kungenjalo intambo iya kuphuma ngexesha lenkqubo yokucheba; ubude bentsontelo yokucheba kuzo zombini iziphelo kufuneka bulingane, kungenjalo ithuba lokucheba liya kufinyezwa ngenxa yokungalingani. Intambo yokucheba ingca ilungele kuphela ukucheba ingca esencinci, ingqindilili, ingca endala esele yenziwe yaqiniswa, ifuna ukusikwa ngebhleyidi. Oku kulandelayo yindlela yomoyaumshini weloni intambo yokucheba.
(1) Susa intloko yokucheba, kukho indawo yentambo yokucheba ngaphakathi.
(2) Songa intambo yokucheba kwisiqingatha, uyijike kwindawo apho intambo yokucheba inxeba khona, kwaye uyibethelele ngaphakathi.
(3) Xa ukubotshwa sele kugqityiwe, dlulisa intambo yokucheba ngaphandle kwemijelo kumacala omabini.
Ukhetho lwe umtshini wokucheba ingcaibaluleke kakhulu. Ngezihlandlo ezahlukeneyo kunye nokukhethwa kwendlela yokutshiza umtshini wokucoca utshani, kufuneka ukhethe i-blade ye-lawn blade efanelekileyo. Ukongeza, ndikhumbuza wonke umntu ukuba kufuneka ukhethe iincakuba zabavelisi besayizi. I-Hangzhou Zhengchida Precision Machinery Co, Ltd iyakhokelaumenzi iincakuba oomatshini egadini e China Wamkelekile ukuthenga.